Ny tombontsoa avy amin'ny feijoa amin'ny vatan'ny vehivavy: fampiasana sy ny fanoherana - Exotic Fruits - 2019
Inona no fampiasana
Mety hisy ny loza sy ny fanoherana
Fitsipika momba ny vokatra vokatra
Ahoana ny fihinanana feijoa
Fampiasana karazana kosmetika
Ahoana ny fomba fanaovana feijoa tsara sy tsotra
Dingana arahina amin'ny sary
Azo atao ve ny manely feijoa amin'ny ririnina
Fiomanana amin'ny voankazo
Fomba entina mangatsiaka
Fanamarihana avy amin'ny mpampiasa tambajotra
Raha ny marina, ny voankazo feijoa dia berry ny haben'ny atody iray, izay manana endrika oval efa ela, dia mety hahatratra dimy santimetatra ny diamondra. Ny felany dia somary mitsambikina, mavo maitso, mavo-mavo ny pulp dia lasa mangarahara rehefa mihamatotra. Ao anatiny dia masomboly kely maina azo hanina. Ny tsiron'io tantely mampitolagaga io dia mampahatsiahy ny anana sy ny trondron-dranomamy ary manitra toy ny saham-boankazo matsiro.
Zava-dehibe izany! Aorian'ny famafazana dia manomboka manimba ny feijoa, mamoy ny fananany mahasoa. Mba hisorohana izany dia ampiasao ny voanjo avy hatrany aorian'ny famafazana na fametahana, ary tehirizo ho azy manontolo. Manimba ny sasany amin'ireo vitaminina koa ny fanodinana ny haingam-pandrefesana, ka ampidiro ao amin'ny faran'ny kobam-bary na ny jelly ihany io harona io.
Fantaro ny fomba ampiasana feijoa amin'ny cosmetology sy ny sakafo.
Izany vokatra tsy mahavelona izany izay misy 47 kilao-kilaometatra isaky ny lanjany 100 grama, noho ny habetsahan'ny kômôhy (11 grama). Ny vina dia 0,5 gr ary ny proteinina - 1.5 g. Samy misy 86 g ny rano 100 g, ny ambiny dia avy amin'ny ambiny maina.
Misy asidra maro be ao feijoa, indrindra fa ny malia sy ny folika. Ity voankazo ity dia misy asidra amino ilaina amin'ny fikarakarana ara-pahasalaman'ny rafi-pitabatabana. Manana iankinan'ny aina, tapa-damba sy tanim-paty izay mamporisika ny tsinay.
Ny harena an-kibon'ny tanin'ity Berry ity dia manankarena. Ny ankamaroany dia misy potasy sy vy, izay ilaina amin'ny fo sy ny fantson-tsoavaly - hatramin'ny 155 sy 120 mg. Ny manaraka dia ny varahina, ny calcium ary ny phosphorus - 55, 17 ary 20 mg ao amin'ny voany. Maro amin'ny feijoa iodine. Ny siramamy sy ny magnesium dia tonga amin'ny ampahany kely. Ny ankamaroan'ny vokatra mahasoa amin'ity voankazo ity dia noho ny habetsahan'ny vitamin C ao aminy - 20.5 mg isaky ny 100 g. Misy vitamina ao amin'ny vondrona B, PP ary vitamin E.
Ny brokoli, ny aloe, ny goji goji, ny persimmon, ary ny akorany no manankarena amin'ny yôdina.
Fantatrao ve? Sambany ilay zavamaniry no hita voalohany tamin'ny taonjato faha XIX tany Brazila, ilay mpandinika zavamaniry Portiogey Juan Feijo, izay nantsoina hoe anarany. Avy eo dia ny halehibeny dia tsy mihoatra ny telo ka hatramin'ny efatra santimetatra, ary ny Ny vatany dia nahitana vatokely lehibe, toy ny vatomamy maranitra. Amin'ny alàlan'ny ezaky ny mpamboly Eoropeana dia nahavita nitondra ilay karazana tamin'ny fonosana mamy tsy misy fery.
Voalohany, tokony homarihina ny votoatin-jiro avo lenta. Ny jodia ao amin'io voangory io dia tsy latsaky ny atin'ny hodi-biby, ny kale sy ny serfa. Ny fanjifana tsy tapaka amin'ity vokatra ity dia manala ny tsy fahampian'ny tsy fahampian-tsakafo, mamaha olana amin'ny lozisialy ny tiroida: mitranga ny fototry ny fototarazo, manomboka ny fatran'ny aretin-kozatra, mihena ny habetsahany.
Faharoa, ny vitaminina C dia manamafy ny hery fanefitra. Mandritra ny fivoahan'ny areti-mifindra dia mampihena ny mety ho aretina. Ny toetra voajanahary azo atodika amin'ity taolana ity dia ilaina ho an'ireo miala amin'ny fandidiana na ny aretina maharitra. Ny ascorbic koa dia manentana ny rafi-kadoaovascular: mitombo ny tonon-taolana, mihamatanjaka ny hozatry ny fo. Ny fananana feijoa ity dia zava-dehibe ho an'ireo olona voan'ny aretim-po, aretim-po na aretina mitaiza.
Hanampy amin'ny fanamafisana ny rafitra immunité dia hanampy ny vokatra vitaminina C: oranges, ny fotsy hoditra, ny radiés, ny menamena mamy, yoshta, menaka mena.
Misy fiantraikany tsara amin'ny digestion dia miharihary amin'ny vokatra manjavozavo: mihalevona ny fihenam-bidy, esorina amin'ny tsininy ny tsinay.
Antioxidants, izay be pitsiny ao Feijoa, dia ajanony ny fahanteran'ny vatana. Mamatotra radika maimaim-poana izy ireo ary manala azy ireo tsy misy herisetra amin'ny vatany. Ny famerenana ny famerenana indray ny rafitra fananahana, izay ilaina ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy; Feijoa dia tsy miteraka zava-mahadomelina, raha manana hetsika antihistamine.
Zava-dehibe izany! Feijoa dia tsy vokatra mahazatra, fa tokony hampidirina tsikelikely ny sakafon'ny ankizy kely ary hatramin'ny taona iray ihany. Raha manome akorandriaka mena amin'ny zaza kely iray ianao, dia tsy ho afaka handany izany ny tsinainy, ary hisy korontana lehibe hitranga.
Ny tombontsoa azo avy amin'io foetus io dia miharihary, fa maro ny reny sy vehivavy maro izay mipetraka amin'ny tazomoka dia liana amin'ny feijoa ny fiantraikany amin'ny zanany.
Ity voankazo ity dia misy zavatra maro ilaina ho an'ny fivoarana ara-dalàna ny foetus. Tena ilaina izy io mandritra ny telo volana voalohany amin'ny maha-bevohoka azy, rehefa miforona ny ratra sy ny tendon-tsolika amin'ny zaza, izay, noho ny fihenan'ny iodine tsy tapaka, dia hanome ny zaza miaraka amin'ny hery fanefitra mahery vaika. Ny asidra folika, fantatra amin'ny anarana hoe vitamin B9 ihany, dia hiaro ny zazakely amin'ny tsy fahampiana. Ny habetsahan'ny vitamina sy mineraly dia hanome ny vatan'ny bevohoka amin'ny zavatra rehetra raisina avy amin'ny foetus. Ny rafitra kardialoka dia hihamatanjaka, izay manan-danja amin'ny fitomboan'ny enta-mavesatra aminy.
Fantaro ny fambolena feijoa ao an-trano.
Raha ny fanoherana izany, raha tsy mahazatra ny vehivavy iray bevohoka ity vokatra ity, aza manararaotra azy. Mila manomboka amin'ny voankazo vitsivitsy ianao, mampitombo ny ampahany, raha mahazatra ny fihetsikao.
Na dia eo aza ny maha-olon-dehibe azy ho an'ny olon-dehibe, dia tsy maintsy mampiditra tsikelikely ny sakafo ny renim-pianakaviana, miaraka amin'ny mason'ny fihetsiky ny zaza. Ny votoatin'ny pectin avo dia hahazoana antoka ny fivalanana ara-dalàna amin'ny tsinain'ny vehivavy Tena manan-danja io trano io amin'ny volana voalohany aorian'ny zaza vao teraka, rehefa sarotra ny fandevona tsikelikely noho ny mikrotraumas sy ny hemorrhoids.
Fantatrao ve? Ho an'ny kontinanta Eoropa feijoa voalohany tamin'ny 1890. Ao France ity zavamaniry ity dia nahatonga fihetseham-po tena izy ary avy eo niparitaka haingana tany atsinanan'ny kaontinanta, nahomby tamin'ny fametrahana azy ireo tany amin'ny saikinosy Crimea sy tany Caucasus. Ny fahatongavana voalohany tonga tany Amerika dia folo taona taty aoriana, tamin'ny taona 1900, ary vao haingana tany California ihany no nitombo.
Ny habetsahan'ny vitamin C dia hanamafy ny tsy fahampian'ny reny sy ny zazakely ary manakana ny dindon-trondro, raha misy izany. Mianjera avy ao anaty kirihitra ireny bozaka ireny ary manangona amin'ny endrika tsy misarona ary mipetrapetraka mandritra ny fitaterana, noho izany dia tsy afaka ny hatahotra ny fisian'ny nitratrana ao amin'izy ireo ianao, manatsara ny fihinana. Iodine, singa iray mahasoa ho an'ny zazakely, dia hita ao anaty endrika mora simba, ankoatra izany, miditra ao amin'ny ronono reniny ho vokatry ny metabolisma, noho izany dia hitondra soa ho an'ny zaza fotsiny izany.
Tsy afaka mampiasa io voankazo io amin'ny tsy fandeferana olona ianao - eo amin'ny tsy fahampian-tsakafo. Ny habetsahan'ny iodine dia mahatonga feijoa ny voankazo voarara amin'ny hyperthyroidism, satria iodine loatra no manimba toy ny tsy fahampiana. Ny sugara ao amin'io vokatra io dia tena maro, noho izany dia azon'ny olona voan'ny diabeta ampiasaina be dia be.
Pectins izay manadio ny tsinontsaina dia tsy mifangaro amin'ny ronono misotro, ka miteraka aretina goavana, ny feijoa sy ny ronono dia tokony hodorana manokana. Mety hiteraka fihenam-bidy sy sakafo poizina koa ny fihinanana voankazo matsiro. Ny zazakely mbola tanora mihoatra ny herintaona dia tsy manana ny enzymes ilaina amin'ny famadihana ny voankazo tropikaly, noho izany dia tsy voatery hanome azy mena izany.
Ny fitsipika fototra - ny berry dia tokony ho lehibe, tsy latsaky ny atody akoho, ary manontolo. Ny bakteria eo amin'ny ati-doha dia miditra amin'ny nofo amin'ny alàlan'ny fihanaky ny voina ary mahatonga ny voankazo ho tsy mahavoka ny fihinan'ny olombelona. Ny voan'ny feijoa avo lenta iray dia maitso maitso sady somary mitsambikina. Tsy tokony ho mainty mainty na fotsy, kisoa, mena na mibontsina. Ny berry dia mety malefaka sy mafy. Ny biriky mafy aorian'ny fividianana dia tsy maintsy halefa mandritra ny andro maromaro mba hikoriana. Ilaintsika ny mandany andro vitsivitsy mba tsy ho simba, satria na dia ao anaty vata fampangatsiahana aza izy ireo dia tsy voatahiry ela.
Manana tombontsoa ho an'ny vatan'olombelona koa ny voankazo hafakely. Fantaro ny fomba ampiasaina araka ny tokony ho izy ireo singa ilaina amin'ny kumquat, guava, kivano, papay, annona, longan, lychee, rambutan, bail.
Matetika, ity hoditra ity dia levona mena. Azo atao tsilofana izy io, hikapoka azy, ary koa, azonao atao ny manapaka azy amin'ny antsasak'izay ka mamoaka ilay holatra amin'ny sotro. Ny hoditr'ity voankazo ity ihany koa dia azo hanina, saingy misy tanety maro be, noho izany dia misy tsirin-javatra mampikorontana ary azo tsaboina amin'ny aretin'ny tsinay.
Feijoa dia mahafinaritra amin'ny fanangonana, jelly, jams. Voafolotry ny siramamy izy io ary voaoty amin'ny ririnina amin'ny ririnina. Aorian'ny fitsaboana haingana dia tsy mamery ny fananany ny berry. Ny fanotaniana maharitra dia manimba vitamin C, ka ny feijoa dia asiana fisotroana ary ny sakafo dia tokony ho eo amin'ny faran'ny sakafo.
Fantatrao ve? Ny fikambanana botanika iraisam-pirenena dia nanaiky io zavamaniry io tamin'ny 1941. Tamin'ny voalohany, feijoa dia tsy azo lazaina ho baiko na oviana na oviana mandra-pahitan'izy ireo ny fitovian'ny loko misy ny voninkazo misy ny fianakavian'i Akka. Feijoa dia nomena karazana hafa, aseho amin'ny karazana karazana hazo madinika.
Na dia eo aza ny siramamy avo lenta, ity ambany ity dia ambany kaloria, ka azo ampiasaina amin'ny sakafo fihinana: tsy hamela ny vatana hanafoanana sy hanohana ny fahantrana marefo. Ny fihenam-bidy dia ho vokatry ny fampiharana ny metabolism. Raha mihinana feijoa iray alohan'ny sakafo tsirairay ianao dia ho haingana kokoa ny sakafo, ary ny fahatsapana fialonana dia ho tonga alohan'ny hanananao fotoana hihinanana.
Izany dia vokatra mahasoa ho an'ny misakafo hariva. Ireo izay tsy mampiasa iodine misy zava-mahadomelina dia mety hihinana 250 grama io voankazo io isan'andro.
Amin'ny ankapobeny, ity voankazo ity dia miasa amin'ny hoditra efa antitra miaraka amin'ireo marika voalohany amin'ny fahanterana: Manamaivana ny hoditra izy io, manatsara ny elasticité ary mampihena ny fahasimbana madinidinika, toy ny fako sy ny fihoaram-pefy. Ny ganagana sy ny tanimintsina dia manify sy manala ny midy, ary manamafy ny rindrin'ny rà mandriaka, izay tena ilaina tokoa ho an'ny vehivavy izay namolavola vina fitsangatsanganana, na rosacea.
Ao amin'ny cosmetology dia ampiasaina toy ny sokatra amin'io voankazo io, sy ny pulpany. Ny rofia amin'ny hoditra amin'io voankazo io dia manampy amin'ny tonic sy ronono manadio mba hampihenana ny jiro. Ny pulp masaka dia manala ny hoditra maina sy mahazatra.
Zava-dehibe izany! Ny fihinanana tafahoatra ny feijoa dia mety hitarika ho amin'ny hyperthyroidism. - Hetsika mahery vaika amin'ny androbe ny tiroida sy ny fitomboan'ny habeny. Hajao ny fanamafisana na dia amin'ity vokatra mahasoa ity aza.
Ny hatsaran-tarehin'ny volo, ny fandroana sy ny tinctures amin'ny hoditra malefaka dia manasitrana ny hodi-doha amin'ny tendrony ary manafoana ny karazana roja. Feijoa masaka manatanjaka ny volon'ireo volon'ondry ary manelingelina azy ireo, mampitombo ny fitomboan'ny volo. Ny fampiasana tsy tapaka an'io voankazo io amin'ny endriky ny masony dia hampatanjaka ny volo volo ary hampiakatra haingana ny volo. Feijoa koa dia mampitombo ny loko voajanahary amin'ny volo noho ny fiantraikan'ny taolana kely sy ny pulp.
Misy fomba roa ahafahana manamboatra an'io alika io - mena sy mahandro. Ny fitsaboana amin'ny hafanana dia mamotika vitaminina sy zavatra hafa mahasoa ao anaty fonosana, ka ny safidy tsara indrindra amin'ny fanasan-tsakafo dia mofomamy, izay antsoina hoe "dimy minitra".
Feijoa - 1.5 kg;
siramamy - 0.5 kg.
Soraty tsara ireo bozaka. Esory ireo karazan-tsakafo voaloto sy simba, ireo izay misy teboka mainty na bobongolo. Arosoy amin'ny savony marefo izy ireo, manadio rano sy rano mangatsiaka. Ao anatin'ity resipe ity dia zava-dehibe ny fahadiovan'ny zavatra naterina voalohany, satria mety ahodinkodina tsy misy fiheverana tsy misy ahiahy.
Hetezo ny voankazo sy ny fitoeran-jiro, avelao izy ireo hikirakira hena amin'ny kafe lehibe na plastika.
Ampio siramamy, hikolokolo tsara ary hivoaka dimy ka hatramin'ny fito minitra mba hamongorana ireo siramamy.
Raha mbola mipetraka ny jam, mila manamafy ny siny roa litatra amin'ny rano mangotraka ianao. Esory izy ireo ary apetraho ao anatin'izy ireo ilay marika. Avelao ny varavarankely ary ataovy ambany ny siny ao anaty vala miaraka amin'ny rano mafana (tsy mihoatra ny 60 ° C). Mitazona folo minitra ary manakombona tsara ny lafaoro.
Mankanesa any amin'ny efitra fisainana. Mialà ao amin'ny vata fampangatsiahana tsy mihoatra ny enim-bolana. Sokafy ny magazay tsy misy herinaratra mihoatra ny herinandro.
Ity fomba fitsaboana ity dia manana tombony amin'ny fiomanana amin'ny endrika jam. Voalohany indrindra, ny tsy firaharahiana ny berry dia tsy voahitsakitsaka, ary faharoa, ny feijoa ara-pahasalamana dia tsy mifangaro amin'ny siramamy manimba.
Fantatrao ve? Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ireo hopitaly amerikana tany amin'ny faritra atsimo efa nampiasaina Feijoa amin'ny sakafo sakafo ho an'ny miaramila miala amin'ny ratra. Efa nahafantarana azy ireo ny toetra mampiavaka ny bakterizidana sy ny immunododulation.
Azo atao ny manala izany voankazo amin'ny endrika manontolo sy amin'ny endriky ny ovy. Na ahoana na ahoana, arotsaho ireo bozaka hanala ireo kopia voaangona avy amin'ny masaka, ary sasao amin'ny rano mangatsiaka amin'ny savony. Hetezo ny tapa-kazo.
Raha te hanala ny voankazo manontolo ianao, aorian'ny famafazana ny tongotra, dia apetraho eo amin'ny kitapo madio ny kitay mba ho maina. Ny volon'aretina maina dia miparitaka amin'ny sehatra iray eo amin'ny fitoeran-dabozia ary apetraka ao amin'ny frizidera. Ampifanampia azy ireo ombieny ombieny ary afanio izy ireo mba hanamaivana azy ireny. Raha vao mihamafy ny tsimok'aretina (amin'ny ankapobeny dia mihantona amin'ny andro iray ny hafanana), ataovy anaty plastika ary afindrany mafy ny ravina. Mangataha feijoa mangatsiaka ao amin'ny frizèera mihoatra ny herintaona. Ny fanamiana ny voankazo madio dia mety ho an'ireo mafana kely. Rehefa avy nopetahany ilay tongotra dia avelao amin'ny voan-tsakafo ny voankazo na atsipazo ao anaty menaka. Arotsaho ny ovy potipoti-bozaka ao anaty fitoeran-dronono matevina, manakombona ny lamba ary avelao any amin'ny frizidera. Tandremo ny fery voaomana ho an'ity fomba ity fa tsy mandritra ny enim-bolana mandritra ny mari-pana maharitra. Tsy azo atao ny mangatsiaka ny ovy.
Zava-dehibe izany! Mihidy ao anaty tsy misy sterile ny fepetra ahafahana mitahiry ao amin'ny vata fampangatsiahana mandritra ny roa herinandro, satria ny microflora ivelany dia mivoatra amin'izany. Raha mandoka fofona manitra avy amin'ny alika ianao, dia aza mihinana ity vokatra ity.
Feijoa dia afaka ampiasain'ny olon-dehibe sy ny ankizy madinika: ny volony dia mandrisika ny hery fiarovan-tena, mamerina ny asan'ny tiroidan'ny tiroida, manatanjaka ny rafi-kozatra sy ny fihenan'ny tsinay. Ny fitiavam-pahaverezin'ity vokatra ity dia mahatonga azy io ho loharano ilaina amin'ny mineraly sy vitamina ilaina amin'ny vehivavy bevohoka sy mihomehy. Ity voankazo ity dia azo alaina amin'ny ririnina amin'ny endriky ny fifangaroan-tsakafo sy mofomamy, ampiasaina amin'ny sakafo ara-tsakafo, cosmetology. Ny fampiasana matetika ny feijoa dia misy fiantraikany tsara eo amin'ny fahasalamana, ny toe-tsaina ary ny mahasoa ankapobeny.
Tiako i Feijoa. Fantatro fa araka ny votoatin'ny iodine ao, dia mitovy amin'ny seafood. Noho izany, ho an'ireo izay manana olana amin'ny ampinga, ny vy dia tena ilaina, mamporisika ny asan'ny tsinay, manala ny poizina amin'ny vatany ary mampihena ny halatra kolosola. Fa ny siramamy dia tsy mihinana, ny voankazo dia miorina ao anaty menaka, mifangaro amin'ny siramamy ary mangatsiaka ao anaty tavoahangy. Izany dia mitahiry vitaminchiki. Manoro hevitra ny rehetra aho afa-tsy ireo izay tsy mifanaraka amin'ny iodine.
Unplorable American Agave: famaritana amin'ny sary, toro-hevitra momba ny fikarakarana tokantrano
Avereno jerena ny atody ho an'ny atody "TGB-210"
Ventilation eo amin'ny akoho amin'ny akanjo amin'ny ririnina sy ny karazany
Fanondrahana lolo mena: fitaovana, famolavolana, famokarana
Karazana paoma "Starkrimson": ny toetra sy ny teknolojia amin'ny fambolena
Ahoana no hanamboarana tongolo zato: torohevitra momba ny fambolena sy fiahiana
Fotoam-pisakafoanana mena midina "Mamy Sunset F1": famaritana ny karazam-borona sy ny fambolena
Zavamaniry zavamaniry Nolin (Bolgara, tavoahangy): sary, fikarakarana tokantrano, famindrana, aretina ary bibikely
Ireo toetra ara-pahasalaman'ny kesika sy ny fanoherana
Ahoana no atao hoe holatra èty holatra: torolalana miaraka amin'ny sary
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ahoana ny fampiasana feijoa ho an'ny vatan'ny vehivavy?